khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal के हो डा.बाबुरामले भनेको अकल्पनीय संकट ? – khabarmuluk.com
के हो डा.बाबुरामले भनेको अकल्पनीय संकट ?
प्रतिनिधिसभा विघटनले निम्त्याएको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट र तीब्र रुपमा बढेको दलीय ध्रुवीकरणले मुलुक अन्योलतामा फसेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि गम्भीर खतराको संकेत गरेका छन।
जेठ २३ गते शनिवार राती एउटा सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै डा.भट्टराईले राष्ट्रिय स्वाधिनता र मुलुकको स्वतन्त्रतामाथि बाह्य शक्तिबाट खतरा बढेको सूचना आफूले पाएको बताउनुभएको थियो । भट्टराईले बाह्य शक्तिबाट मुलुकमाथि खतराको संकेत गरेपनि त्यसबारे थप प्रष्ट नपारेपछि अनेक आशंका पैदा भएका छन् ।
‘बैशाख १३ गते मध्यरात मेरो जीवनमा यस्तो घटना घटेको छ,म अहिले उद्घाटित त गर्दिन । संकेत मात्र गर्छु । कुनै बेला मैले जनतालाई बुझाउनुपर्छ । मसंग भएका इन्फर्मेशनहरु नेपाली जनतालाई बताउनुपर्छ ‘,उनले भनेका थिए ।
भेटमा ओलीले मलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट घेरावन्दी भयो,तपाइँले सहयोग गर्नुपर्यो भनेका छन ।
यद्यपि त्यस्तो सूचना आफूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएपनि त्यसको गलत प्रचार गरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतले डा। भट्टराई प्रधानमन्त्री माग्न मध्यरात बालुवाटार गएको सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका थिए । त्यसबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भट्टराईले मुलुक बर्बादीतर्फ जाँदैछ भन्ने सूचना पाएपछि आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको स्वीकार गर्दै बस्नेतले गलत प्रचार गरेको दाबी दाबी गरे ।
‘म यो देशको जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ,राष्ट्रियतामाथि संकट आउँदैछ भन्ने सूचना पाएपछि मैले यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको हो । आफूले पाएको सूचना प्रधानमन्त्रीलाई बताएर देशलाई बचाउनुपर्छ भनी बिशुध्द पवित्र भावनाले भेट्न गएको थिएँ । यो देशलाई बचाउने हो भने केही गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ,तपाईंले मार्गप्रशस्त गर्नुस् भनेको थिएँ’, उहाँले भन्नुभयो,’तर केपी ओली जो आन्तरिक रुपमा परिवर्तनको विरोधी र बाह्य रुपमा कसैको सेवामा काम गर्ने पात्र हुन्,उनले मैले दिएको सदाशयतापूर्ण विचारलाई उल्टो रुपमा प्रचार गरे । यो कुरा इतिहासमा पुष्टि हुन्छ । कुनै दिन मैले यथार्थ बाहिर ल्याउँछु,अहिले बेला भएको छैन ।’
मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै संकटमा परेको सूचना पाउँदा पनि जनतालाई थाहा दिनु पर्दैन भन्ने प्रश्नमा उहाँले देशको कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी गराइसकेको र समय आएपछि जनतालाई पनि भन्ने बताउनुभयो । तर,आफूले गम्भीर विषय उठाउँदा पनि ओलीले विषयान्तर गरेर सामान्यीकरण गरेको उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले पाएको सूचना के हो त भनेर प्रश्न गर्दा उहाँनिकट स्रोतले संविधान ध्वस्त पारेर दोस्रो खिलराज रेग्मी प्रकरण घटाउने दक्षिणको योजना हुनसक्ने बतायो । उक्त स्रोतले बताएअनुसार राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने र गैरराजनीतिक व्यक्तिको हातमा सत्ता सुम्पिने विदेशी ग्राण्डडिजाइनको मुख्य पात्रका रुपमा प्रधानमन्त्री प्रयोग भएको भट्टराईले जानकारी पाउनुभएको थियो । त्यसको जानकारी उहाँले प्रधानमन्त्री र अन्य दलका नेताहरुलाई पनि दिएका हुन ।
भट्टराईको बालुवाटार भेटघाटदेखिकै प्रसंग जोड्दै स्रोतले अगाडि भन्यो,’केही सूचना पाएकाले नै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई दुईचोटी भेट्नुभएको हो । पहिलो भेटमा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंकै पहलमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सम्भावित खतराबाट मुलुकलाई बचाऊँ भनी प्रस्ताव प्रस्ताब गरे। तर बालुवाटारबाट त्यसको दुष्प्रचार गरियो ।’
मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलताबाट मुक्त गर्न अस्वस्थताका वावजुद भट्टराईले पहल गरेको स्रोत बताउँछ । भट्टराईले पेटको अप्रेशन गर्नुभन्दा दुई दिनअघि बैशाख १३ गते साँझ ७ बजे ओलीलाई भेटेको र उक्त भेटमा राजनीतिक निकासका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गर्नुभएको हो । स्रोतको भनाइअनुसार ओलीसँगको भेटमा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो कुनै आकांक्षा नभएको प्रष्ट पार्दै एउटा नागरिक र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हिसाबले आफूले पाएको सूचना दिन आएको बताएका थिए।
‘उहाँले कुराकानीको प्रारम्भमै म अहिले सानो शक्ति हो,ठूलो आकांक्षा केही छैन । व्यक्तिगत कुरा गर्न आएको पनि हैन । सचेत नागरिकको हिसाबले आफ्नो देशको प्रमलाई भेट्न आएको हुँ भनेर क्लियर पार्नुभएको थियो । पछि प्रधानमन्त्री माग्न आयो भनेर कुप्रचार गरियो’,स्रोत भन्छ ।
ओलीले खास चासो नदिएपछि त्यसै बालुवाटारबाट बाहिरिनुभएका भट्टराई अप्रेशनपछि दोस्रोपटक फेरि बालुवाटार जानुभएको थियो । अघिल्लो पटक आफैं भेट्न जानुभएका उहाँलाई दोस्रो पटक भने ओलीले बोलाएपछि गएको स्रोतले भन्यो । ‘११ बजेको टाइम दिएका थिए । तर उहाँ ५ बजे जानुभएको हो । भेटमा ओलीले मलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट घेरावन्दी भयो,तपाइँले सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुभएछ । भट्टराईले तपाईं आफैँ पहलकदमी लिनुस् र मुलुकलाई बर्बादीतर्फ जानबाट जोगाउनुस् भनेर सल्लाह दिनुभएको हो’,दोस्रो पटकको भेटवारे स्रोतले भन्यो ।
उक्त स्रोतका अनुसार भट्टराईले देउवाको बहुमत नपुग्ने र ओलीले पनि नछोड्ने अवस्थामा इगोको चक्करमा मुलुक फस्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै निकासका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । ओलीले भने आफूलाई घेराबन्दी गरिएको भन्दै सबलाई देखाइदिने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको स्रोत दाबी गर्छ ।जन आस्थाबाट